Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay taariikhda boqorkii Sucuudiga ee saaka geeriyooday (Dhageyso) – Radio Muqdisho
Barnaamijka kulanka Todobaadka ee ka baxa Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka ayaa looga hadlay taariikhda boqorkii dalka Sacuudiga ee saaka geeriyooday Cabdalla Bin Cabdul casiis Ala Sacuud.
Barnaamijka ayaa waxaa qadka Telefoonka uga qeyb galay Xuseen Xaaji Axmed oo ah Diplomaasi ka tirsan Safaaradda Soomaalida ee dalka Yemen, iyo Liibaan Cabdi Cali oo ah aqoonyahan iyo suxufi, waxeyna si faah faahsan uga warameen taariikhda Boqorka, waxqabadkiisii mudadii uu xilka hayay, saamaeynta ay geeridiisu ku yeelatay dunida Islaamka, iyo ninka bedelaya oo ah Salman Bin Cabdul Casiis.
Waxey sidoo kale ka hadleen siyaasaddii boqorka geeriyooday ee ku wajahneyd dunida carabta iyo xiriirkii uu la lahaa guud ahaan wadamada caalamka.
Boqorkii Sacuudiga ayaa waaberigii saaka ku geeriyooday magaalada Riyaad waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta lagu aaso isla magaalada caasimadda ah ee Riyad.
Madaxweynaha oo Tacsi u direy Shacabka Sacuudiga